September 2017 – မဟာခေတ်သစ်မီဒီယာ
30/09/2017 30/09/2017 Yawthama0Comments
ငါ…..အရမ်း”အ”တာ ကိုယ့်အပေါ် လိမ်နေတာသိသိကြီးနဲ့ ပျော်နေမိတာလေ . . . ငါ…..အရမ်း”အ”တာ ကိုယ့်ကို မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်မြတ်နိူးသူကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းမသိဘဲ ကိုယ့်မေတ္တာကို အသုံးချနေသူကိုတော့ ကိုယ့်ဘဝလို့ ထင်နေမိတာလေ။ ငါ…..အရမ်း “အ”တာ ကိုယ့်မျက်ရည်နဲ့ မတန်တာသိသိကြီးနဲ့
30/09/2017 Yawthama0Comments
၁။ ရည်းစားကို စကားနဲ့ရင်းပြီး ချစ်ပါ နှလုံးသားနဲ့ ရင်းပြီး ချစ်မိရင် နှလုံးသားကို နာဖျားစေတယ်။ ၂။ ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားပြီး ချစ်ပါ ချစ်သူကို တန်ဖိုးထားသင့်သလို ယုံကြည်မှူရှိဖို့ လိုပြီး နားလည်အောင် ကြိုးစားပြီး ချစ်ဖို့
“Exခေါ်ရည်းစားဟောင်းကို ​မေ့ပစ်​ရန်​ ( ၉ ) ချ​က် ”
“Exခေါ်ရည်းစားဟောင်းကို ​မေ့ပစ်​ရန်​ ( ၉ ) ချ​က် ” ✏ ၁ ။ မက်​​ဆေ့ဂ်ျ​​တွေ ဖျက်​ပစ်​ပါ ။ ✏ ၂ ။ ဖုန်းနံပါတ်​ကို ဖျက်​ပစ်​ပါ ။
“ ကွီး… ခေးတို့ လမ်းခွဲရအောင် ´´ “ Uာင်..! ဘာလို့လဲ ခေးရဲ့ ´´ ကျူပ်ကို ဘလိုင်းကြီး အဆက်ဖြတ်ဖို့ ပြောလာတော့ ကျူပ်လဲ အတော် ဒေါသ ထွက်တယ်။ သူ့ ရှေ့မှာတော့“၀ုန်း
ငါးတန်းကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကို သစ်သားချောင်းဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည့်ဆရာအား စစ်ဆေးမည် —— —— —— —– —– စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာမြို့နယ် ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စု ငါးလူးတုန်းကျေးရွာ အခြေခံပညာအလယ်တန်း ကျောင်းမှ ပဉ္စမတန်းကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကို သစ်သားချောင်းဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ရိုက်နှက်ခဲ့သည့်
အမေရိကန်နဲ့ နောက်ဆုံးမဟာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားကြဟူသည့် ကြွေးကြော်သံများ မြောက်ကိုရီးယားမှာ သောသောညံ
အမေရိကန်နဲ့ နောက်ဆုံးမဟာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့ အသင့်ပြင်ထားကြဟူသည့် ကြွေးကြော်သံများ မြောက်ကိုရီးယားမှာ သောသောညံ ——– ——- ——– အမေရိကန်နှင့် မဟာစစ်ပွဲကြီးတရပ် ဆင်နွှဲရန် နိုင်ငံသားများကို ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ လှုံ့ဆော်သည့် ပိုစတာများ မြောက်ကိုရီးယားတွင် စိုက်ထူရန် အာဏာရှင်ကင်ဂျုံအန်နှင့် သူ၏
 LDRS ချစ်သူတွေ အနားမှာရှိသလို ဂရုစိုက်​နိုင်​မယ့့်​ နည်းလမ်း​များ 
 LDRS ချစ်သူတွေ အနားမှာရှိသလို ဂရုစိုက်​နိုင်​မယ့့်​ နည်းလမ်း​များ   သင်​တို့ချစ်​သူနှစ်​ဦး LDRS ဖြစ်​​ပေမယ့့်​လည်း အနားမှာရှိသလို ဂရုစိုက်​နိုင်​မယ့့်​နည်းလမ်း​တွေ အများကြီးရှိပါတယ်​ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ၁. သူမကို ဖုန်းနဲ့ အမြဲတ​စေ ဆက်​သွယ်​​ပေးပါ
အိမ်ရှင်မလောင်းတစ်ယောက်၏ အတွေး  ကျွန်မလား..? ယောက္ခမနဲ့ မတည့်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်မအတွက် အနာဂတ် ခင်ပွန်းလောင်းကို မွေး ထားပေးသူကို အမေအရင်း တစ်ယောက်လို ချစ်ပြီး ပြုစုမှာပါ။ ကျွန်မလား…? “သင် ကောင်းရင်
#ဘယ်သူမှအဖော်ပြုပေးမယ့်သူမရှိတဲ့အခါ … ဘယ်သူမှ အဖော်ပြုပေးမယ့်သူမရှိတဲ့အခါ … ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဖော်ပြုပေးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုလေးတွေကြုံပါများလာတဲ့အခါ … ကိုယ့်မျက်ရည်ကိုယ်သုတ်ပြီး ပြုံးတတ်လာပါလိမ့်မယ်။ လဲကျလို့ထူပေးမယ့်လူမရှိတဲ့အခါ … ကိုယ်တိုင်ပြန်ထနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ပဲကိုယ့်ကို နားလည်ပေးကြပါတယ်ပြောပြော ကိုယ့်ကိုကိုယ်လောက် ဘယ်သူမှ နားလည်ပေးနိုင်ကြမှာ
လက်တွဲဖေါ်စစ်_မစစ်_စမ်းသပ်နည်း  ~စားပြီးသားမုန့်ကို ကျွေးကြည့်ပါ။ ( အော်အော့ လုပ်နေပြီဆို ဆောင့်ကန်ထားခဲ့… အားရပါးရ ရှိန်မနေပဲ စားနေပြီဆို အချစ်စစ်ပြီ သေတဲ့အထိ လက်တွဲမယ့်သူက ရွံနေဖို့လိုလို့လား ) ~တစ်ရေးနိုး သန်းခေါင်ကျော် ဖုန်းထခေါ်ကြည့်ပါ။ (